CIRGN Mahajanga: mirary VHF ho an’ny rehetra, indrindra ho an’ny zandary | Région Boeny
Tsy vitan’ny hoe mandray anjara fotsiny fa tena mandray andraikitra tokoa ary tsy vitany mandray andraikitra fa mampadray andraikitra ihany koa, izay no ho ataon’ ny zandary filamatra eo am-panatotosany ny asany amin’ity taona ity.
Io no fanamby goavana nomen’ny Lehiben’ny fari-piadidin’ny Zandarimariam-pirenena Mahajanga, ny Kly Manasse Jean Mananga, ny sabotsy 28 janoary lasa teo, nandritra ny fiaraha-misakafo noho ny taona vaovao 2017, izay niarahan’ny fianakaviam-ben’ny zandary manerana ny faritanin’I Mahajanga tao amin’ny toby Kly Jean Phillippe Mahajanga be.
Mampirisika hatrany sy manome toro-marika ny hanondrotana ny voninahitry ny zandarimariam-pirenena hoy ihany ny Kly Manasse Jean Mananga. Ka mba ho zandarimaria eken’ny maro fa mpiaro ny hasin’ny repoblikanina amin’ny fahaiza-manaony sy amin’ny fiarovana ny mpiara-belona ary amin’ny famerenana amin’ny laoniny ny filaminana anie isika.
Firarian-tsoa manokana no natolony ny fianakaviam-ben’ny Zandarimariam-pirenena izay miatrika ity taona vaovao ity nilaza fa mba ho taonan’ny VHF na voninahitra harena ary fahasalamana ihany koa ho azy ireo ny taona 2017. Voninahitra amin’ny fahavitana am-pahamarinana sy amin’ny ara-dalàna ny asa. Harena ho an’ny saina sy fanahy rehefa tomombana ny fandraisana andraikitra, ary fahasalamana mandava-taona eo am-panatontosana izany.
Tonga nanome voninahitra ny lanonana ny Lehiben’ny Faritra Boeny fianakaviam-ben’ny Zandarimariam-pirenena izay miatrika ity taona vaovao ity, Atoa Saïd Ahamad Jaffar, niaraka tamin’ireo olo-manakaja eto an-toerana.